Ripaky ny hehy ny rehetra rehefa nandre ny fangatahan'ity zazavavikely ity tamin'i Dadabe Noely • Madagossip
il y a 1 année 1.6 K
Anisan’ny vanim-potoana maharavoravo ny ankizy tokoa ny fotoanan’ny fety toy izao. Ho an’ny firenena sasany mantsy dia voaravaka haingo sy hazo Noely avokoa ny làlana sy ny manodidina ary ny ankamaroan’ny trano. Fotoanan’ny tetiandron’ny Avento sy ny lisitry ny Noely ary indrindra ny fanomezana ihany koa moa izany.
Mijanona manerana ireo tanan-dehibe mandritra ny tontolo andro mihintsy ireo Dadabe Noely marobe mba hitondra tsikitsiky ho an’ny kilonga. Matetika dia lasa toa fampihomehezana kely foana izany. Ao ireo ankizy matahotra ity rangahy antitra sy be volombava fotsy. Ao ihany koa anefa ireo mitolagaga raha mahita azy. Ary dia mahafinaritra foana ny sary sy horonan-tsary azo amin’izany.
Raisin’Ingahibe Noely am-pifaliana foana ireo ankizy. Anontaniany matetika hoe hendry ve nandritra ity taona ity ary inona ny fanomezana tiany ho azo amin’ny Krismasy. Nahatalanjona ny olon-drehetra kosa anefa ity zazavavy kely anaty horonan-tsary manaraka ity noho ny valin-teny nomeny. Raha vao mitopy ny masony dia hita ho torovana tokoa izy.
Mikosoka maso izy eo am-pofoan’i Dadabe Noely. Ity farany kosa nanao izay ho hafany ka nanontany azy izay mba fanomezana tiany ho azo. Nitodika tany aminy ilay zazavavy kely, somary nanamboatra volo ary nilaza azy zavatra iray izay nampitokiky tanteraka azy. Nalefan’ireo ray aman-dreniny tamin’ny tambazotran-tserasera ny horonan-tsary ary tena niparitaka tokoa.
Mahafatifaty ery izy! Aza misalasala ary zarao ho hitan’ireo namanao ao amin’ny Facebook ity horonan-tsary ity!
Tagskrismasy noely pere noel